Chọọ ingnye ọkwa Ihe Njikọta 2013 | Martech Zone
Chọọ Nhazi Ihe Nhazi Ọtọ 2013
Thursday, June 27, 2013 Thursday, June 27, 2013 Douglas Karr
DK New Media na nso nso a banyere Nchọgharị ọchụchọ ugbu a anyị na-akwalite ụlọ ha dịka mgbakwunye ebe a Martech Zone. Isi ihe kpatara ya bụ na ha so na mmadụ ole na ole SEO ngwaọrụ nke ahụ na-elekwasị anya na mmetụta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ogo dị ka ihe ndị ọzọ na-akpata SEO.
Kedu ihe ibe weebụ nke Google kwadoro nke ọma jikọrọ ya na ihe na-egosi ọdịiche dị na ha na peeji ndị dị ala? Metlọ ọrụ nyocha enyochare URL 300,000 na-apụta na ọnọdụ nsonaazụ ọchụchọ kachasị elu maka ọnụnọ na ogo nke ụfọdụ njirimara. A na-egosipụta nsonaazụ ya na usoro nke etu njirimara ndị a (ihe ndị a) si gbakwunye na ogo Google (iji Spearman n'usoro mmekọrịta ọnụọgụ).
Nkwupụta a zuru oke ma ọ naghị akọwahie data ahụ (akpata ihe na mmekorita) dị ka ọtụtụ ọkachamara ụlọ ọrụ njikarịcha ọchụchọ na ndị ọkachamara na-eme. Igodo nke mbu maka anyi bu mmetuta nke usoro ihe ichoro jikọtara ya na ndi mmadu sharing. Chaị!
Onodu aku na uba nke oria ogwu
GM: You're Na-eme Nyocha
Ọrụ MOS SEO
Jul 12, 2013 na 5: 10 AM
Ozi oma. Ihe ngosi nke ndi mmadu na ndi isi ochichi Google bu kwa ihe kachasi mkpa n’inweta ogo na SERP.